चुनावी रङ गाढा, आन्दोलन फिका - Marganugami Daily
Marganugami Daily Breaking Headline1 National राजनीति चुनावी रङ गाढा, आन्दोलन फिका
चुनावी रङ गाढा, आन्दोलन फिका
Marganugamidaily प्रकाशित समय 8:13:00 PM
गोलबजार, १६ असार । बुद्यबार अर्थात् असार १४ गते प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ का मतदाताको मन हाँसेको थियो । कारण दुई दशकपछि घरदैलोमै सिंहदरबारको अनुभूतिको लालसासहित मतदान गर्न पाउनुको खुसी । प्रदेश नम्बर २ का मतदाताको मन मुर्झाएको थियो । कारण दोस्रो चरणको चुनाव बहिष्कार पक्षधरको ‘ट्याग’ झुन्ड्याउनुपर्दाको पीडा ।
मत खसाल्ने मन हुँदा पनि निर्वाचन पर धकेलिँदा रनथनिएका यहाँका मतदाताको मन हाँस्ने कुरै भएन। राजपाको चुनाव बिथोल्ने हठले प्रदेश नम्बर २ का मतदाताको हाँसो खोसिएको छ । ’राजपाले हामीलाई मत खसाल्ने अधिकारबाट वञ्चित गरायो, तर आफ्नै नेता कार्यकर्तालाई चुनावी रङबाट अलग राख्न सकेन’, औरही गाउँपालिका हरकट्टी टोलका वीरेन्द्र शर्माले भने।
जहाँ चुनाव छैन (प्रदेश नम्बर २) त्यहाँ बन्द घोषणाको तमासा हास्यास्पद भएको शर्माले टिप्पणी गरे। उनले भने, ’जहाँ चुनाव भयो त्यहाँ राजपाका नेताकार्यकर्ता चुनावमा उम्मेदवार बनेर आन्दोलनको रङ फिका पारिदिए भने बाँकीमा जनताले बन्द बहिष्कार गरेर।’ बुधबार राजपाले गरेको बन्दको प्रभाव अन्य प्रदेशमा त देखिएन नै प्रदेश नम्बर २ मा पनि कुनै प्रभाव परेन। यस क्षेत्रमा सवारीसाधन, उद्योगधन्दा, शिक्षण संस्था, बजार पूर्ववत् रूपमा सञ्चालन भए ।
सडकमा राजपा कार्यकर्ताको उपस्थिति पनि देखिएन । बिहान केहीबेर राजमार्गछेउमा उभिए पनि बजार र सवारीसाधनले गति नरोकेपछि उनीहरू मन मारेर घर फर्केका थिए । जनता चुनावको रङमा रंगिएपछि अहिले आन्दोलनको रङ फिका देखिएको पहिलो लहान विद्रोह (मधेस आन्दोलन ०६३) का नायक कृष्णबहादुर यादवको टिप्पणी छ ।
चुनाव बहिष्कारले राजपालाई फाइदा पुग्यो कि घाटा? यादवले भने, ’फाइदा हुने कुरै भएन, चुनाव बहिष्कारको आन्दोलनले राजपा बडो अप्ठ्यारोमा फसेको छ । उसले न चुनाव बिथोल्न सक्यो न नेता कार्यकर्तालाई चुनावमा सहभागी हुनबाट रोक्न सक्यो ।’ राजपाका एक नेताले भने आफूहरूलाई बडो धर्मसंकटमा फसेको महसुस भएको बताए । ’जनतादेखि कार्यकर्तासम्म चुनावको रङमा छन् । यस्तो माहोलमा बहिष्कारको रङ फिका हुने नै भयो’, उनले भने ।
दोस्रो चरणको चुनावका लागि राजपा सहभागी हुने वातावरण बन्दै गएका बेला सरकारसँगको सकारात्मक वार्ता अचानक अर्कोतर्फ मोडिँदा आफूहरू हामी चुनावी प्रक्रियाबाट अलग्गिएर आन्दोलनमा उत्रिएको उनले बताए । उनले भने, ’तर, जनताको आन्दोलन भाँडिएको छ । उनीहरू चुनावमार्फत शान्ति र स्थरिता चाहिरहेका छन् । आन्दोलनको बन्धक बनेर पछाडि पर्नुभन्दा चुनावको बाटो रोजेर विकास र समृृद्धि चाह्नेको संख्या व्यापक छ ।’
‘अहिले आन्दोलनभन्दा पनि चुनावको उत्साह छ,’ सिरहाका समाजसेवी नवीनकुमार यादव भन्छन, ‘छिमेकी प्रदेशमा भइरहेको चुनावको उत्साहले राजपाको आन्दोलनलाई प्रभावहीन बनाइदिएको छ ।’ दोस्रो चरणको निर्वाचनले मधेसी जनताको मनमा चुनावी रङ गाढा र आन्दोलनको रङ फिका बनेको प्रस्ट भएको उनले बताए ।
स्थानीय चुनाव लोकतन्त्रको प्राणवायु हो । यसलाई बहिष्कार गर्नु लोकतन्त्रलाई बहिष्कार गर्नु,’ हो मधेस मामिलाका विश्लेषक डा. राजेश अहिराज भन्छन, ‘राजपाले आन्दोलनको कोर्स करेक्सन गर्नुमै भलाइ हुन्छ ।’ अहिले मधेसका जनता बन्दहडताल गर्ने मुडमा छैनन् । यहाँका जनता चुनावको मुडमा देखिन्छन । मधेसी जनता आन्दोलनको दुःखले आजित भइसकेकाले आन्दोलनका कुनै कार्यक्रम लोकप्रिय हुन नसक्ने अहिराजको तर्क छ ।
स्थानीय तहको चुनावसँग जनताको जन्मदेखि मृत्युसम्मको सवाल जोडिएको छ । सिंहदरबार खण्डित भएर गाउँसहरका जनतासमक्ष फैलिँदैछ । यो सुविधाको लाभ लिन लालायित छन् मधेसी जनता। अहिले मधेस बाहुल्य क्षेत्र अर्थात् राजपाकै आधार क्षेत्र चुनावी रङमा रंगिएर आन्दोलनको रङ पारिदिएको देखिएको छ । अहिराज विश्लेषण गर्छन, ’जमिन अर्थात् पिँधका जनताको चाहना विकासमुखी राजनीति हो, राजपाको कोर्स करेक्सन यतातिर हुनुपर्छ ।’